Rayson | Zinus Fortcoil 6 inch
Rayson na Rayson Mpaghara, Huasha Road, Shashan, Foshan High South Mpaghara, Guangdong, China. Isi Ngwa kacha mma kachasị amasị ụfụfụ nke onye na-ebunye akwụkwọ nri. Ebe nchekwa foam vs mmiri vs mmiri na-enweghị atụ, ndị na-eweta akwụkwọ nri Rayson mere nnukwu arụ ọrụ na imeziwanye ahụmịhe ndị ahịa. ,Ve., Ụfụfụ. Ndị na-eme ihe na-emebu ndị na-eme ihe nkiri Rayson mmiri na-atọ ndị ahịa mmiri nke ukwuu.
Site na ike R & D siri ike na ike nrụpụta, Rayson ugbu a abụrụla ọkachamara na onye na-eweta ọrụ a pụrụ ịdabere na ụlọ ọrụ. Ngwaahịa anyị niile gụnyere Zinus Posts Forvery 12 inch mepụtara dabere na sistemụ nchịkwa na usoro mba ofesi. Zinus siri ike akara ngosi 12 inch anyị ga-eme ike anyị niile ijere ndị ahịa ozi niile site na nhazi ngwaahịa, R & D, inyefe. Nnọọ ịkpọtụrụ anyị maka ozi ndị ọzọ gbasara ngwaahịa Zinus First Firm 12 inch ma ọ bụ ụlọ ọrụ anyị.People nwere ike ịmịchasị mma ma kpọọ nkụ na-agbasa mmiri na anụahụ. Kama, ọ na-enyefe ọsụsọ ngwa ngwa.